Qisadii Jaceyl Ee SRK Iyo Gauri Khan: Dhibka Uu U Maray Helitaanka Jaceylkiisa Guurka Gauri Oo La Diiday Iyo Diinta Ay Isku Guursadeen (+Sawiro) – Filimside.net
Qisadii Jaceyl Ee SRK Iyo Gauri Khan: Dhibka Uu U Maray Helitaanka Jaceylkiisa Guurka Gauri Oo La Diiday Iyo Diinta Ay Isku Guursadeen (+Sawiro)
Kusoo Dhawaada Aqristayaasheen qiimaha badan qeybta labaad ee maqaalkeena aan kaga hadlaynay Qisadii jaceyl ee Shah Rukh Khan iyo xaaskiisa Gauri Khan.
Qeybta koowaad ee maqaalkeen wuxuu noo maraayay SRK ayaa la kulmay lama filaan naxdin ah maadaama Gauri Mumbai isaga tagtay iyada oo aan wax u sheegin jaceylkeeda iyo asxabteeda fadlan hoos kaga bogo maqaalkeena qeybtiisa 2-aad.
SRK iyo dhibka uu u maray helitaanka jaceylkiisa
Shah Rukh khan markii jaceylkiisa meel cidlo ah kaga tagtay waliba iyadoo dhalasheeda ah wuxuu dareemay murugo badan iyo xanuun jaceyl maadaama ka tagtay gabadha uu sida waalida ah u jeclaaday.
SRK wuxuu ahaa qof aad ugu dhow hooyadiisa wuxuuna u sheegay wax walbo oo dhacay waxayna ku waanisay in uusan niyad jabin marnaba sidoo kale raadiyo jaceylkiisa xitaa waxay siisay lacag 10 kun Rupee si uu helo jacelkiisa ka dib Srk wuxuu isku wacay dhamaan asxaabtiisa waxay si wadajir ah Gauri ugu raadiyeen magaalada gees ka gees laakiin Gauri lama helin.
Ka dib Srk ma niyad jabin ugu danbeyn wuxuu ka helay iyadoo jeegto xeeb markay is arkeen midba midka kale ayuu si jaceyl ah u fiirinaayay waliba wey wada ooyeen waqtigaas qof walbo wuxuu go’aansaday in midba midka kale uusan ka maarmin.
Labadaan lamaane oo si lama filaan ah isku arkay waxay go’aan ku gaareen in ay is guursadeen maadaama si saaid ah isku jacel yihiin waana meesha uu ka bilawday in guurka la qaban qaabiyo.
SRK oo loo diiday Gauri maadaama uu yahay Muslim iyo diinta ay isku guursadeen
Srk iyo Gauri markay go’aan ku gaareen inay is guursadaan dhib ayaa soo wajahay maadaama Shah Rukh Khan uu Muslim yahay halka Gauri Hindu tahay sidoo kalena aabaheed waa qof ku dhegan diintiisa oo xitaa guriga mandir ugu yaaalo.
Dhinaca kale Shah Rukh Khan qoyskiisa Muslim ayay ahaayeen laakiin Srk si uu Gauri u helo wuxuu sameeyay in magac Hindu uu baxsado si ay u aqbaleen qoyska Gauri.
Ugu danbeyn Srk markii la ogaaday inuu muslim yahay waa loo diiday Gauri laakiin wax walbo oo dhaco ugu danbeyn Srk iyo Gauri wuxuu guurkooda dhacay October 25, 1991 wuxuuna ahaa guur Hindu ah.
Waxaana la sheegay guurka Hindu ka dib in ayagana guur Muslim ah dhigteen laakiin xaqiiq lama heeyo hada ka hor Srk wuxu sheegay in guurkiisa uu ahaa Hindu.
SRK Iyo Xaaskiisa Gauri haatan waa qoys farxad ku nool
Super Star Shah Rukh Khan iyo xaaskiisa Gauri Khan haatan waxaa u joogo labo wiil iyo hal gabbar Aryan Khan, Abram Khan, iyo Suhana Khan waana qoys farxad ku nool.